Ubukrelekrele bengeyonyani kunye ne-blockchain ene-Horizon Oasis | Izixhobo zasimahla
Izixhobo zasimahla | | ngokubanzi
Kuza kukhokelela kwicandelo lophuhliso lwetekhnoloji enika izisombululo zesoftware kwiinkampani ezincinci nezinkulu kwihlabathi liphela kwaye ilawula ukudibanisa amava obuchwephesha, ubukrelekrele kwezamashishini kunye neseti yeengcali eziqeqeshwe kuyo yonke imimandla yophuhliso lwezisombululo zedijithali, igama lakhe ngu Horizon oasis Kwaye namhlanje sichaza ngokuthe kratya malunga nale nkampani iphazamisayo intle namhlanje.
1 Yintoni i-Horizon Oasis?
2 Izixhobo zobugcisa obuphezulu
3 I-Horizon Oasis ishenxisa izithintelo ekufikeleleni kubuchwephesha obutsha
Yintoni i-Horizon Oasis?
Yasekwa ngo-2019 ngu UCristian Carmona, usomashishini odumileyo we-fintech onamava kwiiprojekthi ezahlukeneyo ezinxulumene ne-blockchain kunye nee-asethi zedijithali. UCristian Carmona uphakamisa ukwabiwa kwabasemagunyeni kwitekhnoloji ukuze kuxhamle bonke oosomashishini kwihlabathi liphela ngokuxhotyiswa kwabantu ukukhokela utshintsho olululo kuluntu kunye nokwenza iiprojekthi ezinkulu kunye neengcinga ziphumelele ngokuba nazo zonke izixhobo eziyimfuneko.
I-Horizon Oasis iqala ngenkqubo yayo yokwandisa kwaye iyaqhubeka nokuvula iiofisi ukusebenza eDubai ukuzibeka njengenkampani ekhokelayo ekudalweni nasekuphuhlisweni kwezisombululo ezinokongeza ixabiso ebantwini; Oku kunokwenzeka kuphela enkosi kwiqela elenziwe ziingcali zetekhnoloji ezinje ngonjiniyela kunye neenkqubo zeenjineli eziqeqeshelwe ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezenziwe phantsi kwemigangatho esemgangathweni ophezulu.
Izixhobo zobugcisa obuphezulu
Uninzi lwezi mveliso kunye neenkonzo zenziwe ngobukrelekrele bokuzenzela kunye netekhnoloji ye-blockchain okoko ngokubeka ezi zixhobo zimbini zinamandla kunye, uninzi lwezinto onokukhetha kuzo unokulufumana xa kusenziwa iinkqubo zokuphucula kunye nokwenza lula iinkqubo zokuphucula amava omsebenzisi ngalo lonke ixesha. IBlockchain inesakhono sokudibanisa abantu ngokudibanisa amaqonga asemthethweni apho ulawulo olufanayo lusezandleni zabasebenzisi ukunqanda ubuqhetseba kunye nokukhohlisa kwabantu besithathu.
Ixhala le-Horizon Oasis mihla le ukuzisa izisombululo zesoftware kubo bonke abantu ngokusebenzisa ezinye iimveliso ze-blockchain ezinje ngokudalwa kwezivumelwano ezifanelekileyo kwi-Ethereum blockchain, ukuphuhliswa kobungqina bezicelo zesiteki, usetyenziso lwesipaji, iikhontrakthi ezifanelekileyo, iirobhothi kunye neendlela zokurhweba, ii-master node, iindawo zokuqinisekisa, amaqela smart, phakathi kwezinye izixhobo.
I-Horizon Oasis ishenxisa izithintelo ekufikeleleni kubuchwephesha obutsha
Isakhono sokuvelisa ifuthe elilungileyo ngokwabela abaphantsi amagunya kuqala ngokwenziwa kwendalo apho bonke abasebenzisi banokufikelela kwezi teknoloji zintsha kunye nokuphuhlisa izisombululo kuwo onke amacandelo emveliso, kuthathelwa ingqalelo iimfuno zabathengi; Yile nto ijolise kuyo i-Horizon Oasis ngokwenza itekhnoloji yokuphazamisa ifumaneke kuwo wonke umntu, bobabini abaqalayo kunye neengcali kwimicimbi yedijithali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » ngokubanzi » Ubukrelekrele bokwenziwa kunye ne-blockchain ene-Horizon Oasis
LR41: funda ngakumbi ngezi bhetri